Xerada Dhagaxley ee dagaanka Dhadhaab oo manta si weyn looga xussay 13 guuradii ka soo wareegtay aas aaskii Qorahay Media. Dec 28, 2012 (QOL) Xerada Dhagaxley ee dagaanka Dhadhaab waxaa manta si weyn looga xussay 13 guuradii ka soo wareegtay aas aaskii Qorahay Media, xafladdan oo ay ka soo qeyb galeen dhamaan qeybaha uu ka kooban yahay Faraca Midnimo oo Jaaliyada Ogaadeenya ee Bariga Afrika ka mid ah.
Xaflada waxaa si aan kala hadh lahayn uga soo qayb galay Ururka OYSU ururka hooyooyinka, ururka culimaa’u ddiinka iyo marti sharaf kale oo aad u tira badan, xafladda oo bilaabatay abaare 8:30 daqiiqo waxaa lagu billabay wacdi diini ah waxaana xigay qudbado kala duwan oo ay halkaas ka soo jeediyeen marti sharaftii madasha ka hadashay kuwaas oo dhamaantood hanbalyo u soo jeediyey Qorahay Media.
Kadib markey soo gaba gabowday qeybtii koobaad ee xaflada ayaa waxaa madasha suugaan ka turjumeysa dadaalka ay Qorahay Media mudadii ay jirtay waddey iyo qaar lagu dhiiri galinayo intaba ku soo bandhigay kooxda Hillaac oo ah dhallin da’yar ah oo qeyb weyn kaga jira sare u qaadida suugaanta, hidaha iyo dhaqanka Soomalida Ogaadenya gaar ahaan suugaan halgameed si weyn mar walba loola dhaco.
Kooxda Hilaacwaxay soo bandhigeen heeso iyo ciyaaro ay intaba u sameeyeen Qorahay Media waxaana la soo afmeeray kulanka oo xiiso badnaa abaare 10:00 galabnimo, xafaladdii manta oo dhameys tiran oo muuqaal waxaad kala socon doontaan Idaacada Radio Qorahay sidoo kale sawirro dheeraadah oo xafladaas muujinaya waxaad kaga bagan doontaan wararkeena dambe haddii Alle idmo.
Daljir Keyd Qorahay Media Dhadhab, Kenya